Ny fitaovana fiaraha-miasa sy ny fampiraisana vaovaon'i Vimeo dia mametraka azy ho toy ny fenitra ho an'ireo mpanao horonantsary | Martech Zone
Ny fitaovana fiaraha-miasa sy ny fampiraisana vaovaon'i Vimeo dia mametraka azy ho fenitra ho an'ireo mpaka sary
Alahady 26 Febroary 2017 Zoma, Septambra 29, 2017 Douglas Karr
Iray amin'ireo orinasa mpifanolo-bodirindrina aminay amin'ny fananganana ny studio misy anay dia ireo mpanao cinematographer tsy mampino, lamasinina 918. Manam-pahaizana manokana amin'ny fitondrana ny fitaovany amin'ny toerana rehetra eran'izao tontolo izao izy ireo ary mamokatra horonantsary epic. Tsy ny hatsaran'ny asa vokariny ihany anefa no mahavariana. Nandany ny fotoanany tamin'ny famolavolana ny tantara izy ireo, namadika azy io ho sehatra, avy eo nandrafitra ny tetikasan'izy ireo tsy misy dikany. Mahagaga ny valiny… ireto misy santionany amin'ny alàlan'ny Company Reel:
Nihaona tamin'ny iray amin'ireo mpanorina aho ary niresaka taminy momba ny fitaovana ampiasain'izy ireo hiaraha-miasa na mpiara-miasa hijerena ny asan'izy ireo. Nasongadin'i Joshua izany Vimeo nanitatra ny fitaovan'izy ireo vao tsy ela akory izay, nanome izay rehetra nilain'izy ireo. Ny voalohany dia ny pejy famerenana horonantsary ahafahan'ny mpandinika manisy marika ny fizotry ny fotoana misy ny naoty ary mifampiresaka etsy sy eroa. Ny faharoa dia fampidirana mivantana amin'ny Adobe Premiere Pro izay ahafahan'ny fampidinana mivantana any Vimeo.
Pejy famerenana horonantsary Vimeo
Famerenana sy fanamarihana fiaraha-miasa - Ireo mpandinika dia afaka manindry mivantana ireo sary rehetra mba hamela naoty voamarika ara-potoana. Rehefa tsindrio ny naoty dia mitsambikina avy hatrany eo amin'ny sehatra mety ianao.
Mizarà amin'ny Reviewers tsy voafetra - Alefaso soa aman-tsara ny rohy pejy fandinihana manokana na iza na iza - na dia tsy ao amin'ny Vimeo aza izy ireo.
Araho ny fandrosoanao - Valio amin'ny fotoana tena izy, na avadiho ho lisitra tokony hatao ny fanamarihana mba ho tsotra kokoa noho ny hatramin'izay ny fanavaozana ny horonan-tsarinao.
Vimeo Panel ho an'ny Adobe Premiere Pro
The Vimeo Panel ho an'ny Adobe Premiere Pro mamela ireo teknisianina mpamokatra horonan-tsary hanatsotra ny fizotran'ny asa fanovana azy ireo amin'ny alàlan'ny fanomezana fitaovana hampiakarana mora foana ny lahatsarin'izy ireo avy amin'ny rindrambaiko. Vimeo Ny mpikambana PRO na Business dia afaka mamorona pejy fandinihana avy amin'ny tontonana maimaim-poana. Anisan'izany ny:
Ampidino eo noho eo ny horonan-tsary - Alefaso mivantana any amin'ny anao ny horonan-tsarinao Vimeo kaonty, safidio ny toerana misy anao manokana rehefa mampakatra ianao, manafatra ny presetanao manokana momba ny encoding, sy maro hafa.
Mitsitsia ny fotoana famokarana - Mifantoha amin'ny asanao ary ataovy tsotsotra ny fizotran'asao amin'ny alàlan'ny fampidirana horonantsary sy famoronana pejy famerenana nefa tsy miala amin'ny Premiere Pro.
Sintomy ny Vimeo Panel ho an'ny Adobe Premiere Pro
Fampahafantarana: Martech dia Nomena alalana Adobe Affiliate ary Vimeo Affiliate. Mampiasa ny rohy mpiara-miasa aminay ato amin'ity lahatsoratra ity izahay.
Tags: Adobeadobe premier proLahatsary Marketingpremiere provideo collaborationvideo reviewVimeopejy famerenana vimeo
Inona avy ireo tombony sy ROI amin'ny Search Engine Optimization?
Febroary 27, 2017 amin'ny 4:28 PM
Hey Doug, nanandrana nizara ity fampahalalana ity tamina vondrona mpanao sarimihetsika ara-barotra tao amin'ny Facebook aho, saingy nampidirina ho lahatsary. Ny ratsy kokoa, tsy hilalao izany rehefa tsindrio eo. Ny lahatsoratra mihitsy dia tsy hifandray na hiseho.
Febroary 27, 2017 amin'ny 6:42 PM
Tsy milalao tsara na iza na iza ny Facebook!
25 Oktobra 2021 à 8:52
Tsy afaka nilaza tamin'ny lahatsoratrao aho ary tsy nahita na inona na inona hanamafisana na lavina ao amin'ny tranokala Vimeo, saingy fantatrao ve raha azo atao ny mamela ny antoko faha-3 ny fahafahana manome karazana interface tsara hampidirana horonan-tsary amin'ny kaontinao Vimeo fa tsy ny tompon'ny compte no ampiakarina?
Heveriko fa tranga ratsy indrindra azonao atao ny mampiasa serivisy famindrana rakitra toa an'i WeTransfer mba hahazoana ilay rakitra video ary avy eo ampidiro ao amin'ny kaonty Vimeo hanombohana ny fiasa fiaraha-miasa.
25 Okt 2021 amin'ny 2:48 PM
Azo atao izany - manana ny Vimeo upload API. Izy ireo koa dia manana a fitaovana fiaraha-miasa izay azo ampiasaina alohan'ny hamoahana horonantsary hizarana sy hanangonana hevitra.